Filazam-baovao faha-144 -
Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-144
HO FANOHANANA NY FANAJANA NY ZON’NY OLOMPIRENENA AO MANOMBO-ATSIMO ARY HO FANOHERANA NY KOLIKOLY AMIN’NY ENDRINY REHETRA
Ny BLUEOCEAN LTD, orinasa aziatika nijoro teto Madagasikara ny volana janoary 2019, dia mikasa hiorina ao amin’ny kaomina ambanivohitra Manombo-Atsimo, faritra Atsimo Andrefana, mba hiasa amin’ny fambolena akorandriaka sy ny fanondranana ireo vokatra avy amin’ny hazan-dranomasina. Izany orinasa izany dia tompon’andraikitra amin’ny fihetsika misy vokany mampidi-doza amin’ny zo ara-toekarena, sosialy ary kolontsain’ny vondrom-piarahamonina manodidina, ary koa amin’ny tontolo iainana an-dranomasina ao an-toerana.
Ny fitrandrahana ataon’ny orinasa ao amin’ity tanàna kelin’ny mpanjono Vezo ity, dia voalaza fa tokony hihanaka eo amin’ny 250 hekitara eo amoron-dranomasina, ary hisy fiantraikany mety hanimba ny antom-piveloman’ireo mpanjono madinika sy ireo honko izay misy ampahany tena manan-danja eo amin’ny harena voajanahary lovain-jafy ao an-toerana. Na dia tsy mbola eo am-pelatanany avokoa aza ny fahazoan-dàlana ilaina amin’ny asany (1), dia mikasa ny hipetraka eo amin’ny toerana atao hoe Milikoke ireo mpanohana an’i BLUEOCEAN, toerana manan-tantara izay misy ny fasan’ny mponina, izay manohitra ny fanalàna azy ireo.
Fanampin’izay, ireo mpivoy sy mpanohana ny orinasa BLUEOCEAN LTD dia miray tsikombakomba amin’ny kolikoly sy fanararaotam-pahefana ataon’ny mpiara-dia aminy eo anivon’ny manam-pahefana ao an-toerana, izay "toa nampanantenana fanomezana ara-bola be ho mariky ny fankasitrahana (commission)" hono (2). Ankoatr’izany, dia naheno izahay fa nandrahona ireo mpitarika ny fikambanana Femmes en Action Rurale de Madagascar (FARM) tamin’ny alàlan’ny antso an-tariby ny mpanohana ny orinasa. Manohitra ny fiorenan’ity orinasa ity ao amin’ny tanànany mantsy ny ankamaroan’ny mpikambana amin’ny FARM, na eo aza ny vola nolazaina fa homena azy ireo ho takalon’ny fanekeny.
Ankoatr’izany, vehivavy maro mpikambana ao amin’ny FARM izay nindrana vola tamin’ny mpivarotra iray ao an-toerana - izay sady manam-pahefana eo an-tanàna manohana ny fananganana ny BLUEOCEAN LTD ao Manombo ihany koa - no nentina tany amin’ny tobin’ny zandarimaria ary nasaina nanome ny fanekena ny tetikasan’ity orinasa ity, raha tsy izany dia hahazo sazy noho ny trosa tsy voaloa.
Manoloana an’io toe-javatra io, ireo fikambanana manao sonia ity Fanambaràna ity dia miantso ny tompon’andraikitra mahefa mba hanatanteraka amin’ny fomba mahomby ny fanaraha-maso ny zavatra ataon’ny orinasa BLUEOCEAN LTD manokana, sy ireo mpampiasa vola vahiny amin’ny ankapobeny eo amin’ny sehatry ny toekarena manga, mba tsy hahatonga ny fampandrosoana azy ho lasa antony hampanjakàna ny kolikoly sy hanitsakitsahana ny zo fototry ny vondrom-piarahamonina any ifotony.
Tena maika ny fandraisana fepetra satria mirongatra mihamaro ny fihetsiketsehana ataon’ny mponina manerana ny firenena vokatry ny fahakiviana mihatra amin’ny vondrom-piarahamonina miatrika tetikasan’ny mpampiasa vola, toy ny tranga misy any Vohilava distrikan’i Mananjary.
Antananarivo, 9 septambra 2020
Filambanana TANY miaro ny tany malagasy - Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info, www.facebook.com/TANYterresmalgaches
Femmes en Action Rurale de Madagascar (FARM) https://web.facebook.com/farmadagascar